Xeer-hoosaadka Golaha waa inuu qeexo dasyuurka ay lagama maarmaan noqonayso in Golaha Shacabku yeesho fadhiyo ay albaabadu u xiranyihiin. Wada-xaajoodyada Caalamiga 1 Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah.
Golaha Wasiirrada 1 Awoodda fulinta ee Jamhuuriyadda Federaalka ah waxaa sopmaaliya Golaha Wasiirrada, waxayna u qabanayaan sida Dastuurka ku tilmaaman. Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka waxaa kale oo uu leeyahay awoodahan dheeriga ah ee soo socda: Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Bangiga Dhexe ee Federaalka Caruurta 1 Ubad kastaa markuu dhasho wuxuu xaq u leeyahay inuu helo magac suubban iyo jinsiyad.
Cutubka 9aad Laanta Dastuuurka ee Federaalka. Qodob kale oo Warar ah. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah 1 Xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadda lagu aqoonsaday qaybtan waa in la dhowraa marka kasta oo sharci la dejinayo lana fulinayo. Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta.
Xiriirka Shaqada 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xiriir shaqo caadil ah. Gobannimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa laguma-xadgudbaan. Xubnaha Guddiga Xuduudaha iyo Federaalaynta; 5. Xorriyadda Isu-socodka iyo Degitaanka August 23, Soomaalita iyo Astaanta Qaranka Awoodaha Maxkamadda Dastuurka 1 Maxkamadda Dastuurku waay yeelaneysaa awoodahan u garrka ah: Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Dastuurkan KMG ah inkasta oo aan loo codeyn, kuma xusna sida ay noqoneyso xaaladda soomaaaliya iyo waxa ku dhacaya awoodahiisa, laakin dastuurkii soomaalija ayaa arrintaas ka hadlay. Qaxootiga iyo Magangelyada 1 Qof kasta oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku soo gala qaxootinnimo wuxuu xaq u leeyahay in aan dib loo celin ama aan loo qaadin dal kale, haddii ay jirto cabsi muuqata oo ah in uu la kulmayo ciqaab.
Xildhibaannada mooshinka keenay, waxaa ay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen: Guddiyada Wadaagga ee Baarlamaanka Federaalka 1 Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ahi waxa ay dhisan dasstuurka guddiyo wadaag ah oo hawlahooda u fududeeya. Sharciyadda oo Weli Socda Ilaalinta Xuquuqda Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa.
Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladda a Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladdu waxay xilkooda u gudanayaan si waafaqsan sharciga iyo danta guud oo keliya. Qaadashada wax ka bedelka Dastuurka inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; ansixinta Dastuur kama dambays ah Qodob kale oo Somali ah. Notify me of new posts by email. Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga.
Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka: Dhaqaalaha iyo Xuquuqda Bulshada 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahaybiyo nadiif ah uu cabo. Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal.
Awoodda Garsoorka Jamhuuriyadda Federaalka Waajibaadka Caalamiga Ah Inta heshiiska wax waajibinaya ee jirey taariikhda uu Dastuurkan dhaqan gelayo uu waqtigiisu dhacayo ama wax laga beddelayo, waajibka heshiiskaa ka dhashey sidiisa ayuu u jirayaa Qodobka aad. Suggidda Amniga Jamhuuriyadda Federaalka 1 Xukuumadda Federaalku waxay damaanad-qaadaysaa nabadda, gobannimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo bedbaadinta shacbigeeda, iyadoo la adeegsanaayo adeegyada ciidammada amniga oo ay ku jiraan: Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Golaha Shacabku ee Baarlamaanka Federaalku wuxuu matilaa dhammaan shacabka Soomaaliya, Awoodda sharci-dejinta ee Golaha shacabku keligii leeyahay waxaa ka mid ah: